Pregnancy – စာမကျြနှာ 8 – Healthy Life Journal
မေး ။ ဆရာ မင်္ဂလာပါရှင့် ကျွန်မနာမည်……ရှင့်။ အသက် ၃၁နှစ်ပါ။ အခု ကိုယ်ဝန်က ၃ လထဲမှာပါဆရာ။ မေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ သဘောင်္သီးစိမ်းစားရင် ကလေးပျက်တတ်တယ်။ မပျက်ကျရင်တောင် ကလေးမှာ ချို့ယွင်းချက် တခုခုဖြစ်တတ်တယ်လို့ ပြောကြပါတယ်ဆရာ။ အမှန်ပါလားရှင့်။ ဖြေကြားပေးပါဦးဆရာရှင့်။...
ကိုယ်ဝန်ဆောင် ဝေဒနာ (Pregnancy Pains)
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ မေး. ဆရာရှင့် ကျွန်မအသက် ၃၆ နှစ်ရှိပါပြီ။ အခု ကိုယ်ဝန် ၂၇ ပတ်ရှိပါပြီ။ ကျွန်မ ခြေတွေ၊ လက်တွေ တအားနာတယ်ဆရာ။ ခြေတွေလည်း ရောင်တယ်။ လမ်းလျှောက်လည်း ခြေတွေတအားနာတယ်။ လက်ချောင်းတွေလည်း နာတယ်ဆရာ။ ကျေးဇူပြုပြီး ဖြေပေးပါနော်ဆရာ။...
အိမ်ထောင်ပြုရင် ကလေးရနိုင်ပါ့မလား . . .
မေး။ ။ ကျွန်မသမီး ရာသီမလာခင် ၁၂နှစ်အရွယ်လောက် ရေအိတ်လေးတွေ့လို့ အိုဂျီနဲ့ပြဖူးပါတယ်။ ရာသီလာတဲ့အရွယ်ရောက်ရင် ပျောက်သွားမှာလို့ ပြောပါတယ်။ အခုအသက် ၁၈နှစ်ရှိပါပြီ။ အိမ်ထောင်ပြုရင် ကလေးရနိုင်၊ မရနိုင်သိပါရစေ။ Thein Thein Oo(FB) ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွန့် ဖြေကြားသည်။ ဖြေ။ ။...
၊ မီမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်ဆိုတာ အမျိုးသမီးတွေအတွက် စိန်ခေါ်မှုများတဲ့ ကာလပါပဲ။ ဒီအချိန်မှာ အဖြစ်များတဲ့ ကျန်းမာရေး ပြဿနာအများစု လျော့ကျစေဖို့ အမည်းရောင်ချောကလက်ဟာ အသုံးဝင်ပါတယ်။ – ကိုယ်ဝန်ဆိပ်တက်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါတယ် ကိုယ်ဝန်ဆိပ်တက်တာက ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာဖြစ်တတ်ပြီး သွေးတိုးလို့ဖြစ်ရတာပါ။ အဲဒီလိုဖြစ်ရင်...
ကိုယ်ဝန်စရှိတယ်ဆိုတာ . . .(Pregnancy and Conception)
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ (ကန်တော့ပါ) ကိုယ်ဝန်ရှိပြီဆိုတာ Sperm ကျားသုက်ပိုးနဲ့ Egg မ-မျိုးဥတွေ Fertilization ပေါင်းစပ်ချိန် Conception သန္ဓေတည်ချိန်ကို ခေါ်တာလား။ အဲဒီလိုဖြစ်လာပြီး နောက်တစ်ပတ်အကြာ Embryo implantation သားအိမ်ထဲမှာ တွယ်ကပ်လိုက်ချိန် ကိုခေါ်တာလား။ ဒီအယူအဆ ၂ မျိုးကို...
ကိုယ်ဝန်ရှိမှာ ကြောက်တယ် . . .
မေး။ ။ ကျွန်မ အခုထိသံသယ၀င်နေတာလေး မေးချင်လို့ပါ။ ဆေးခန်းပြရမှာ ရှက်လည်းရှက်တယ် ကြောက် လည်းကြောက်မိလို့ပါ။ ကျွန်မနဲ့ ကျွန်မချစ်သူနဲ့ မတ်လ ၁၈ရက်က အတူတူအိပ်ခဲ့ပါတယ်။ အကာ အကွယ်မပါလို့ ဟိုကိစ္စအထမမြောက်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မအင်္ဂါအ၀မှာတော့ ပေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလမှာလည်း ကျွန်မရာသီလာခဲ့ပါတယ်။...
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ မေး ။ ဆရာ ကျွန်မနာမည်က – – -ပါ။ အသက်က ၂၅ နှစ်ပါ။ အိမ်ထောင်ကျတာ ၇ လရှိပါပြီ။ ကျွန်မတို့က အတူမနေရပါဘူး။ အလုပ်က တစ်ယောက်တစ်နေရာစီမို့ တစ်လကို ၃ ရက်လောက်ပဲ အတူနေဖြစ်တာပါ။...
ရာသီလာရင် ကိုယ်ဝန်မရှိဘူးလား . . .
မေး. အခု ကျွန်မရာသီလာတာ ပုံမှန်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်ရှင့်။ အဲ့ဒါ ကိုယ်ဝန်မရနိုင်ဘူးလို့ ဆိုလိုနိုင်လားရှင့်။ ရာနှုန်းပြည့်မရနိုင်ဘူးလို့ ဆိုနိုင်လားရှင့်။ အဆင်ပြေရင် ဖြေပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။ Lin Thu (FB) ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွန့်မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. ရာသီပုံမှန် ဟုတ်၊ မဟုတ်ဆိုတာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်...
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်အတွင်း အဆီပိုတက်ခြင်း ကင်းအောင်
၊ မီမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ကိုယ်ဝန်ဆောင်၊ ကလေးမွေးပြီးချိန်မှာ အများအားဖြင့် အဆီပိုတွေရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ လိုက်နာသင့်တဲ့ နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ – ဗီတာမင်အေ၊ စီနှင့် အီးများများပါသော အစားအသောက် စားပါ ဒီအစားအသောက်တွေက သင့်အသားအရေ လှပအောင်လည်း အထောက်အပံ့ပေးနိုင်သလို...
မေး. ကိုယ်ဝန်ရှိချိန်မှာ ဆီးချိုရှိနေတာ .. ဆရာဝန်က ဆီးချိုဆေးတွေပေးတော့ သောက်ရတယ်၊ အဲ့ဒါ ခေါင်းမူးပြီး မထနိုင်ဘူး။ ဆက်သောက်ရမလား။ မသောက်ဘဲနေလို့ကော ရနိုင်ပါသလား။ အိနိုင် (FB) ပါမောက္ခဒေါ်သန်းသန်းအေး (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. ကိုယ်ဝန်ရှိချိန်မှာ...